Hamro Yatra | » पूर्वप्रधानमन्त्रीको मुद्दा दायर गर्न नमान्ने सरकार, झन् सर्वसाधारणले कस्लाई के बिश्वास गर्ने ? पूर्वप्रधानमन्त्रीको मुद्दा दायर गर्न नमान्ने सरकार, झन् सर्वसाधारणले कस्लाई के बिश्वास गर्ने ? – Hamro Yatra
> पूर्वप्रधानमन्त्रीको मुद्दा दायर गर्न नमान्ने सरकार, झन् सर्वसाधारणले कस्लाई के बिश्वास गर्ने ?
पूर्वप्रधानमन्त्रीको मुद्दा दायर गर्न नमान्ने सरकार, झन् सर्वसाधारणले कस्लाई के बिश्वास गर्ने ?
१५ वैशाख, काठमाडौं । सांसद अपहरणको किटानी जाहेरी प्रहरीले लिन नमानेपछि नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले अहिले दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले पूर्व सचिवलाई थुनामा राख्ने तर सांसद अपहरण भएको भन्दै जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दायर नगरेको घटना प्रति कटाक्षेप व्यक्त गर्नुभयो ।
डा. कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अजबको सरकार गजबको कानुन भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका छन् । डा. कोइरालाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको साथमा अपहरित व्यक्ति स्वंय मूद्दा दर्ता गर्न जाँदा समेत लिन मान्दैन भने सर्वसाधारण जनताले कसलाई के विश्वास गर्ने भन्दै पश्न पनि गरेका छन् ।
डा.कोइरालाले लेख्नुभएको छ, ‘सरकारको बिरोध गरेको भन्दै साईबर अपराधको मुद्दामा एक जना पुर्व सचिव प्रहरी हिरासतमा छन। तर, अर्को तिर पूर्वप्रधानमन्त्रीको साथमा अपहरित व्यक्ति आफै उपस्थित हुँदा पनि प्रहरी अपहरणको मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैन। अजबको सरकार गजबको कानुन। अनी सर्वसाधारणले कस्लाई के बिश्वास गर्ने ?